Sida loo doorto kuleylka saxda ah ee ku habboon gurigaaga | Ragga Stylish
Un nidaamka kululaynta hufan Waxay ku siin doontaa suurtagalnimada inaad kaydiso oo aad yareyso biilasha tamarta. Sidaa darteed, waa arrin aad muhiim u ah marka la sameynayo dib-u-habeyn, dhaqan-celin ama marka la bilaabayo shaqo cusub.
Markaad dooranayso nidaamka kuleylka ee gurigaaga, waa inaad tixgeli xulashooyinka kala duwan: kuleylka dhulka hoostiisa, kululeeyaha kululeeya, biomass, bamka kuleylka, iwm.
1 Waxyaabaha uu ka kooban yahay kiis kasta
2 Kululeeyaha kululeeyaha
3 Bamka kuleylka
4 Dabaqa shucaaca
5 Kuleylka kuleylka
Waxyaabaha uu ka kooban yahay kiis kasta
Talada ugu fiican ee aad ku dooran karto nidaamka kuleylka wax ku oolka ahi waa inaad adigu u ogolaato inuu kugula taliyo qof khabiir ah. Isaga ayaa noqon doona kan sida ugu wanaagsan u qiimeyn doona astaamaha gurigaaga, aagga cimilada ama aagga, xulashooyinkaaga maalgashi, iwm. Iyada oo dhammaan xaddidan, xulashada ugu fiican ayaa la gaari doonaa.
Qodob kale oo muhiim ah in laga fiirsado ayaa ah gaaska. Haddii ay jirto albaab laga galo gaaska dareeraha ah gurigaaga, ama aysan jirin rakibis ku filan oo loogu talagalay waddadaada ama aaggaaga.
Mid ka mid ah nidaamyada ugu isticmaalka badan uguna waxtarka badan. Waxyaabaha kale, maxaa yeelay waxay siin karaan kuleyl iyo biyo kulul si dhakhso leh oo hufan. Hawlgalka kuleylka kuleyliyaha waxay hagaajinayaan shidaalka, keydinta tamarta waxayna leedahay waxtarka tamarta sare.
Sida ku xusan daraasad 2011 Greenpeace ah, bamka kuleylka ayaa ah nidaamka kuleylka ugu wax ku oolka badan. Faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah inay bixin karto kululayn, biyo kulul iyo qaboojin. Nidaam keliya ayaan ku dabooli karnaa baahiyaha qaboojinta guriga.
Waa nidaam aad u hufan. Waxay ku siisaa raaxo badan guriga, waxay kaloo leedahay ikhtiyaarro loo isticmaalo qaboojiyaha, iyo sida dhammaan nidaamyada ay leedahay faa'iidooyinka iyo khasaaraha.
Biomass waa baddel ku habboon kuleylka. Ku shooladaha pellet iyo kuleyliyaha kuleyliyaha biomass. Sidoo kale, waxay ku xirnaan kartaa nidaamyo kale oo kululaynta iyo biyaha kulul.
Ilaha sawirka: Kululaynta | Xalka Dexterior - Valladolid / Adeegga Farsamada
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Nidaamka kululaynta ee gurigaaga
Aad baad u mahadsantahay, Paco! Maqaalkani waa mid aad u xiiso badan (: Waxaan u maleynayaa inay jiraan dad badan oo aan si fiican u aqoon sida kuleyliyahoodu u shaqeeyo ama maxay yihiin xalalka ugu fiican marka la eego keydinta iyo joogtaynta. Noocyada noocan ah ee loo yaqaan 'blogs' waxaa ku jira macluumaad aad u faa'iido badan leh oo si yar wax uga ogaanaya sida shaqada guriga, Aad baad u mahadsan tahay!
Jawaab ku sii Saunier Duval
Ma rabtaa inaad bilowdo inaad caafimaad qabtid?